धूम्रपान न गर्नेको रूपमा, के मेरो COVID-१ virus भाइरस धूम्रपान न गर्नेको भन्दा बढी हुने जोखिम हो?
यस प्रश्नोत्तर तयार गर्ने समयमा, त्यहाँ कुनै पियर-समीक्षा गरिएको अध्ययनहरू छैन जुन SARS-CoV-2 संक्रमणको जोखिम धूम्रपानसँग सम्बन्धित छ भनेर मूल्याated्कन गरेको छ। यद्यपि, चुरोट पिउनेहरू (सिगरेट, पानीका पाइप, बिडी, सिगार, तम्ति धूम्रपान गर्ने पदार्थहरू) कोविड १ 19 को सिकार हुन सक्ने बढी खतरा हुन सक्छ, किनकि धूम्रपान गर्ने कार्यले ओठमा अ fingers्गहरू (र सम्भवतः दूषित सिगरेटहरू) को सम्पर्क राख्दछ, जसले सम्भावना बढाउँदछ। भाइरसको हातबाट मुख सम्म प्रसारण। धूम्रपान गर्ने पानीपिकहरू, जसलाई शीशा वा हुक्का भनेर पनि चिनिन्छ, प्राय: जसो मुखको टुक्राहरू र नलीहरूको साझेदारी हुन्छ, जसले सांप्रदायिक र सामाजिक सेटिंग्समा COVID-19 भाइरसको प्रसारण गर्न सजिलो बनाउन सक्छ।
धूम्रपान न गर्नेको रूपमा, के म संक्रमित भएमा बढी गम्भीर लक्षणहरू पाउने सम्भावना छ?
कुनै पनि प्रकारको सुर्तीजन्य धुम्रपानले फोक्सोको क्षमता कम गर्दछ र धेरै श्वासप्रश्वासको संक्रमणको जोखिम बढाउँदछ र श्वास रोगको गम्भीरता बढाउन सक्छ। COVID-19 एक संक्रामक रोग हो जुन मुख्य रूपमा फोक्सोमा आक्रमण गर्दछ। धूम्रपानले शरीरमा कोरोनाभाइरस र अन्य श्वासप्रश्वासका बिरूद्ध लड्न गाह्रो पार्छ। उपलब्ध अनुसन्धानले धूम्रपान गर्नेहरूलाई गम्भिर COVID-19 परिणामहरू र मृत्युको उच्च जोखिममा हुने सुझाव दिन्छ।
भ्यापरको रूपमा, म संक्रमित हुने सम्भावना बढी हुन्छ वा संक्रमित भएमा बढी गम्भीर लक्षणहरू देखा पर्न सक्छु?
ई-सिगरेट प्रयोग र COVID-19 बीचको सम्बन्धको सम्बन्धमा कुनै प्रमाण छैन। यद्यपि अवस्थित प्रमाणहरूले संकेत गर्दछ कि इलेक्ट्रोनिक निकोटीन डेलिभरी प्रणाली (ENDS) र इलेक्ट्रोनिक नन-निकोटीन डेलिभरी प्रणाली (ENNDS), जसलाई सामान्यतया ई-सिगरेट भनेर चिनिन्छ, हानिकारक हुन्छ र हृदय रोग र फोक्सोको विकारको जोखिम बढाउँदछ। दिइएको छ कि COVID-१ virus भाइरसले श्वासप्रश्वासको मार्गलाई असर गर्छ, ई-सिगरेटको हात-बाट-अनुहारको कार्यले संक्रमणको जोखिम बढाउन सक्छ।
धूम्रपान नगरी सुर्तीजन्यको प्रयोग गर्ने बारेमा के भन्ने?
धुम्रपान नगरी सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्न प्राय हातको अनुहारको सम्पर्क देखिन्छ। धूम्रपान नगरी सुर्तीजन्य उत्पादनहरू प्रयोग गरेर अर्को जोखिम हो, जो कि चुरोट सुर्तिजन्य हो, कि भाइरस फैलिन सकिन्छ जब प्रयोगकर्ताले च्यूइ process प्रक्रियाको बखत उत्पादन गरिएको थप लार बाहिर थुक्छ।
धूम्रपान गर्नेहरूको लागि डब्ल्यूएचओले के सिफारिस गर्छ?
स्वास्थ्यलाई जोखिम दिईयो जुन सुर्तिजन्यले प्रयोग गर्दछ। छोड्नाले तपाईंको फोक्सो र मुटुलाई रोक्नको लागि अझ राम्रोसँग काम गर्दछ। छोड्नेको २० मिनेट भित्र, उन्नत हृदय गति र रक्तचाप ड्रप। १२ घण्टा पछि, रक्त प्रवाहमा कार्बन मोनोअक्साइड स्तर सामान्यमा खसालिन्छ। २-१२ हप्तामा, रक्तस्राव सुधार हुन्छ र फोक्सोको कार्य बढ्छ। १- months महिना पछि खोकी र सासको कमी आउँछ। छोड्नाले तपाईंको प्रियजनहरू, विशेष गरी बच्चाहरूलाई दोस्रो हातको धुवाँको जोखिमबाट बचाउन मद्दत गर्दछ।
डब्ल्यूएचओले टोल फ्री रिल्ट लाइनहरू, मोबाइल टेक्स्ट-सन्देश प्रवाह समाप्ति कार्यक्रम, र निकोटिन प्रतिस्थापन उपचारहरू (NRTs) जस्ता, अन्य मध्येको तम्बाकूको प्रयोग त्याग्नको लागि प्रमाणित हस्तक्षेपहरू प्रयोगको सिफारिश गर्दछ।
म धूम्रपान, धुम्रपान नगरी सुर्तीजन्य प्रयोग र भापिंगसँग सम्बन्धित जोखिमहरूबाट मानिसहरूलाई बचाउन म के गर्न सक्छु?
यदि तपाईं धुम्रपान गर्नुहुन्छ भने, ई सिगरेटको प्रयोग गर्नुहोस् वा धुम्रपान नगरी सुर्ती प्रयोग गर्नुहोस्, अब उत्तम समय पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नको लागि हो।
वाटरपिप र ई-सिगरेट जस्ता उपकरणहरू सेयर नगर्नुहोस्।
धूम्रपान, ई-सिगरेटको प्रयोग र धुम्रपान नगरी सुर्तीजन्यको जोखिमको बारेमा शब्द फैलाउनुहोस्।
अरूलाई दोस्रो हात धुवाँको हानिबाट बचाउनुहोस्।
तपाईंको हात धुनुहोस्, शारीरिक दूरी, र कुनै पनि धूम्रपान वा ई-सिगरेट उत्पादनहरू साझा नगर्नुको महत्त्व जान्नुहोस्।
सार्वजनिक स्थानमा थुक्नु हुँदैन
के निकोटीनको उपयोगले COVID-19 को सन्दर्भमा मेरो अवसरहरूलाई असर गर्छ?
त्यहाँ COVID-19 को रोकथाम वा उपचार मा सुर्ती र निकोटीन बीच कुनै लिंक पुष्टि गर्न अपर्याप्त जानकारी छ। डब्ल्यूएचओले अन्वेषक, वैज्ञानिकहरू र सञ्चारमाध्यमलाई अभिवृद्धि गर्न नसक्ने दाबी गर्छ कि सुर्तिजन्य वा निकोटीनले COVID-१ of को जोखिम कम गर्न सक्दछ भन्ने बिरूद्ध सतर्क हुन आग्रह गर्दछ। WHO ले निरन्तर नयाँ अनुसन्धानको मूल्या evalu्कन गरिरहेको छ, जसमा सुर्तीजन्य प्रयोग, निकोटीन प्रयोग, र COVID-19 बीचको लिंकको परिक्षण गर्दछ।
Google मा साझेदारी गर्नुहोस्
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रियाहरू छैनन्। यस लेखमा टिप्पणी पोष्ट गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनुहोस्!